WiFi ဟက်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း (ပုံနှင့်တကွ တစ်ဆင့်စီ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်) ~ Shwenagar
Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password ကျွန်တော် အစကတော့ ဒီပိုစ့် ဆက်မရေးတော့ဘူးဆိုပြီး ပစ်ထားလိုက်တာ ဒီနေ့ ပျင်းနေတာနဲ့ ပြန်ဆက်ရေးဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ WiFI hack လုပ်တာကို နည်းလမ်းများစွာ လေ့လာကြရဖူးမှာပါ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာကိုပဲ လေးငါးခုလောက်ရှိနေပြီ အခု ဒီနည်းကတော့ လက်ရှိ အသုံးပြုနေဆဲ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးလို့ ပြောရပါမယ် ကျွန်တော် စာဖတ်သူအဆင့်အတန်းများကို မူကြို အဆင့်ကနေ စနားလည်အောင်လို့ အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ တစ်ဆင့်စီ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ပညာရှင်တွေကတော့ ကြည့်တာနဲ့ သိမှာပါ ပထမဆုံး စာဖတ်သူမှာ ရှိထားရမယ့်ဟာလေးတွေ အရင်ပြောပေးပါမယ် 1. USB pen drive တစ်ချောင်း 2. beini.iso file အောက်မှာ ဒေါင်းလင့်ထည့်ထားပေးပါတယ် 3. USB drive bootable လုပ်နိုင်ဖို့ UNetbootin software လိုပါတယ် [Download for Windows, Linux or Mac] ကဲ အခု ( WEP) ကို လုပ်နည်း ပေါ့ ဗျာ ပုံစံပြောတာပဲနော် 1.USB UNetbootin နဲ့ beini.iso ဖန်တီးထားပါမယ် အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ လုပ်တတ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ် Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password 2. နောက် စက်ကို Restart ပေးပြီး USB ကနေ Boot တက်ပေးပါ 3. BOOT တက်တာ အောင်မြင်ရင်အောက်ကပုံလို မြသ်ရပါမယ် အဲဒီမှာ ပုံပြထားတဲ့အတိုင်း Minidwep-gtk ကိုနှိပ်ပါမယ် WiFi Hacking2 4. နောက် OK. Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password 5. အောက်မှာ Minipwep-gtk program ပွင့်နေတဲ့ပုံပါ အဲဒီမှာ Scan ကိုနှိပ်ပါ ၀ိုင်းပြထားပါတယ် Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password 6. wireless network တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ် ဒီအတွက် Client ကိုရွေးပြီး ပေါ်လာတဲ့ listတွေထဲကတစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါ နောက် creaking process စတင်နိုင်ရန်Lunch ကိုနှိပ်ပေးပါ Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password 7. သင့် victim connections တွေရဲ့ IVS value နဲ့ password strength တွေကို ရှာဖွေနေပါမယ် Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password 8. password ကို ရှာတွေ့ပါပြီ ဒီသင်ခန်းစာက ဒီမှာ ပြီးပါပြီ အောက်မှာ အဆက်ပြီးWPA/WPA2 အတွက် သဘောလောက်ပြလိုက်ပါတယ် Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password ဒီအောက်ကပုံမှာ လေ့လာပါ Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password,wifi hacking,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password.pdf,Easy Way to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password pdf book,how to Hack WEP/WPA/WPA2 Wi-Fi Password ခိုးနိုင်ကြလို့ သီလပျက်ကြပါစေဗျာ... အာကာဖြိုး(နည်းပညာ) Download Link : Mediafire Pass : www.akarphyoe.com
Website များ Facebook Page များကို ကိုယ်ပိုင် Apk လုပ်နည်း
"Old photo, vintage effect"ပြုလုပ်နည်း
Can I change the audience for something I share af...
When I share something, how do I choose who can se...
Facebook ရဲ့ Comments နဲ့ Chatting မှာ ရုပ်ပြောင်ေ...
Facebook wall စာမျက်နှာမှာ သူများစာလာရေးမရအောင် ပိ...
RSS Feed ၏ အသုံးဝင်ပုံ
CD drive ပျောက်နေရင်
နှစ်သက်ရာ စာလုံးထဲတွင် မိမိပုံကို ထည့်သွင်းခြင်း
ကိုယ့်ဆီမှာ က G mail က နှစ်ခု ရှိတယ် .. ဒါပေမယ့် m...
Gmail ကနေ Email ကို ဘယ်သူပို့မှန်းမသိအောင် ကိုယ့်ေ...
VLC player ကို စိတ်ကြိုက်လှည့် ကြည့် နည်း
Delete your friend's facebook account
facebook အလန်းဇယား ( addon )
Sudoku gadget လေး website မှာထည့် မယ်
Google ကိုကစားပြီးတော့ ရယ်ရအောင်
(တစ်နေ့ တစ်နေ့ Facebook က Mail တွေကြောင့် စိတ်ညစ်ေ...
ဘလော့ နှင့် ဝက်ဆိုက်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ Tool ၉ ခု
face book Home page စတိုင်
ကွန်ပြူတာ mouse မျှားပုံကို အရုပ်ပုံလေးများထည့်နည်...
Google ကိုစားတဲ့ Zerg Rush ပိုးကလေး
YouTube ရဲ Desige အသစ်လေးဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
Desk ပေါ်က File နဲ့ Folder တွေကို Mouse မသုံးပဲဖွင်...
CMD BOX စာသားအရောင်နှင့် နောက်ခံအရောင်ပြောင်းနည်း
Keygen / Serial number/ Crack file တွေကိုအလွယ်တကူရ...
Window အတက်မှာ မတက်စေချင်တဲ့ Program တွေကိုဖြုတ်ထာ...
Geo counter လိုချင်ရင် ရယူနည်း
ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့် ပြီး အိမ်လိပ်စာရှာမယ် ( ကြိုး...
O/S , IP address &Browser gadget
How to watch Star Wars Through command prompt
Run command မှာသုံးမဲ့ Keys လေးတွေပါ
Notepad ကိုသုံးပြီး English စာလုံးတွေကိုအသံထွက်ခို...
Make the main body wider in blogger
Add Image Beside Sidebar Titles Blogger
Blogger's New HTML Editor ( ဘလော့ဂါ တိုင်းဖတ်ရန် )...
image size အား ကြည့်ရူနည်း